हामीभित्रै छ : गुण र अवगुण ! – Chitwan Post
हरेक व्यक्तिभित्र गुण र अवगुण दुवै हुन्छ । अँध्यारो र प्रकाश पनि दुवै हामीभित्रै हुन्छ । शङ्का र स्पष्टता पनि भित्रै छन् । यदि हामी यस संसारमा हराइरहेका छौँ भने हराउनु अनि आफूले आफैँलाई पाइरहनु भएको छ भने पाउनु, ती हामीभित्रै छन् । हामीले कुनै चीजलाई हेर्दा सौन्दर्यको अनुभूति हुन्छ, त्यो सौन्दर्यको आनन्द पनि भित्रै छ । किनकि हामी जेजति गरिरहेका छौँ त्यसको स्रोत हामीभित्र छ । यदि मैले कुनै कुरा बुझिरहेको छु भने त्यसको स्रोत म नै हुँ । अनि, बुझिरहेको छैन भने पनि त्यसको स्रोत म नै हुँ । यस सृष्टिका रचनाकार जसलाई हामी खोजिरहेका छौँ– अनि राक्षस, जसबाट म बच्न चाहन्छु, दुवै मभित्रै छन् । म जहाँ गए पनि– दुवै मसँगै जान्छन् किनकि सबैथोक मभित्रै छ !
कैयौँ पटक कोठामा गएर ढोका बन्द गरेपछि हामी सोच्दछौँ–‘अब म एक्लै छु ।’ तर, त्यतिखेर पनि हामी एक्लो हुँदैनौँ । जसले सम्पूर्ण सृष्टिलाई रचना गरेका छन् अनि दुष्टता जसबाट सारा संसार आजित भएका छन् : दुवै हामीसँगै आएका छन् । सँधैँ ! जेसुकै भइरहेको भए पनि दुवै सँगै छन् । अवगुणलाई छोड्नु या गुणलाई अपनाउनु, दुवै तपाईँको नियन्त्रणमा छ ।
शान्ति पनि कतै बाहिर छैन । त्यो पनि हामीभित्रै छ । यदि शान्ति अर्कै कुनै स्थानबाट आइरहेको छ भने गडबड छ । यसको अर्थ यसो हो– यदि शान्ति पृथ्वीमा भएको कुनै कुवाबाट आइरहेको छ अनि हामी हवाइजहाजमा पचास हजार फिट माथिबाट उडिरहेका छौँ भने हामी शान्तिको अनुभव गर्न सक्दैनौँ । तर यदि त्यो शान्ति भित्रबाट आइरहेको छ भने हामी जहाँ सुकै भए पनि त्यसको अनुभव गर्न सक्छौँ । यदि हामी केवल बाहिरबाट लडिरहेका छौँ अनि भित्रबाट शान्त छौँ भने शान्तिको अनुभव त लडाइँको मैदानमा पनि हुन सक्छ ।
बाहिरी शान्ति ल्याउनका लागि आन्तरिक शान्तिको अनुभूति गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यसलाई एउटा उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यदि तपाईंसँग पानीले भरिएको गाग्रो छ अनि तपाईं रेलमा यात्रा गरिरहनुभएको छ । तपाईंले गाग्रोको ढकनीलाई खोलेर हेर्नुभयो भने पानी हल्लिरहेको देख्नुहुन्छ । तपाईंको मनमा विचार उत्पन्न हुन्छ, “पानी किन हल्लिरहेको छ ? गाग्रो त हल्लिरहेको छैन ?
मैले यसलाई राम्रोसँग समातेको छु तैपनि पानी हल्लिरहेको छ ।” त्यसको कारणका बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ । ट्रेन हल्लिरहेको हुनाले गाग्रो पनि हल्लिरहेको छ र पानी पनि । चाहे तपाईँ गाग्रोलाई जतिसुकै जोडले समातेर बस्नुहोस्, पानी त हल्लिन्छ नै । ठीक त्यसैगरी यदि तपाईं अशान्त हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईं हल्लिरहनुभएको छ भने बाहिर पनि अशान्ति नै हुनेछ । यदि तपाईं भित्रबाट शान्त हुनुहुन्छ भने त्यही शान्ति बाहिर पनि प्रकट हुन्छ । किनभने शान्ति त हामीभित्रै छ ।
यो भनाइ हो– मानवता र शान्तिका बारेमा चर्चा गर्नुहुने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता प्रेम रावतको । यस कार्यका लागि कैयौँ सरकारी एवम् शैक्षिक संस्थाहरूद्वारा उहाँलाई ‘शान्तिदूत’ को उपाधि प्रदान गरिएको छ । आफ्नो सन्देशको चर्चाका साथसाथै उहाँले मानिसहरूलाई आत्म–सम्मान, शान्ति र समृद्धिका साथ जीवनयापन गर्नलाई मद्दत गर्ने उद्देश्यले ‘द प्रेम रावत फाउन्डेसन’ नामक एउटा परोपकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ ।
यो संस्थाको विभिन्न परियोजनामध्ये एउटा हो– ‘जनभोजन कार्यक्रम’ जसअन्तर्गत आवश्यक पर्ने मानिसहरू तथा बालबालिकाहरूलाई दैनिक पोषणयुक्त भोजन तथा स्वच्छ खाने पानी उपलब्ध गराइन्छ । प्रेम रावत फाउन्डेसनले अन्य ठूला परोपकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर विश्वभरि नै प्राकृतिक विपत्तिमा राहत प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग पनि गर्दछ ।
प्रेम रावतको सन्देश www.premrawat.com र www.timelesstoday.com वेबसाइटहरूमा पनि उपलब्ध छ ।
साइनिङले रजत वर्ष मनाउने